Xaaskii hoggaamiyihii ISA abuBakr Al Baghdadi oo Turkiga uu qabtay | YoobsanNews.com
Danjire aways amiin sheikh “ Waxan tacsi u dira Almaas Elman geeridii naxdinta lahayd ee ku timid..
Pentagonka mareykanka oo sheegay in ay been tahay Kuuriyada Koonfureed ciidamadiisa kala baxayo..
Yaa ka dambeeyay dilkii loo geystay Almaas Elman?
Iran Supreme Leader Khamenei backs petrol price hike decision
Xaaskii hoggaamiyihii ISA abuBakr Al Baghdadi oo Turkiga uu qabtay
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Dowladdiisa ay gacanta ku dhigtay xaaska hogaamiyihii hore ee kooxda la baxday Khilaafada Islaamka, Abubakar al-Baqdaadi.
Waxaa horey loo sheegay in Abubakar al-Baqdaadi ay la dhinteen laba kale oo ka mid ah xaasaskiisa, haddana lama oga waxa ay tahay xaaskan kale ee ay sheegtay dowladda Turkiga in ay gacanta ku dhigtay.
Madaxweyne Erdogan ayaa caasimadda dalkaas ee Ankara ka sheegay in sidoo kale ay horay gacanta ugu dhigeen haweeney ay walaalo yihiin Al Baqdaadi.
Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka uu si xad dhaaf ah u buunbuuniyay dhimashada Al Baqdaadi.
“Waxaan halka ka sheegayaa markii ugu horeesay in aan gacanta ku dhignay xaaska Al Baqdaadi, balse ma aynaan buunbuunin sida Mareykanka oo kale, waxaan sidoo kale gacanta ku dhignay seedigii iyo dumaashidii”, ayuu yir Erdogan.
Talaadadii, Saraakiisha Turkiga waxay sheegeen in la soo qabtay Rasmiya Awad oo la dhalatay Abubakar Al Baqdaadi, ayna suuragal tahay in “laga helo sir qiimo leh”.
Rasmiya waxaa la sheegay in laga qabtay gobolka Xalab oo hadda ciidamada Turkiga ay maamulaan. Waxaa laga dhex helay gaari wayn oo ay kula dhex nooleyd seygeeda, dumaashideed iyo shan carruur oo kale, sida sarkaal Turki ah uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP.
Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore shaaciyay in hoggaamiyihii muddada dheer dhuumaaleysiga ku jiray ee kooxda la baxday Dowladda Islaamka ee Daacish lagu dilay hawlgal milatari oo Mareykanka uu ka fuliyay woqooyi Galbeed ee dalka uuriya.
Madaxweyne Trump oo warbaahinta kula hadlayay Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in Abubakar Al Baqdaadi uu qarxiyay jaakaddii uu xirnayd oo ay ku rakibnaayeen walxaha qarxa ka dib markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay uga daba galeen god uu ku cararay.
Abubakar Al Baqdaadi ayaa soo shaac baxay sannadkii 2014, xilligaasi oo uu magaalada Mowsil uga dhawaaqay “dowlad Islaami” ah oo ka shaqeyn doonto waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
Kooxdiisa Daacish ayaa lagu eedeeyay in ay tacaddiyo badan ka geysatay gudaha waddamadaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen kumannaan qof.
Hawlgalkan lagu dilay Al Baqdaadi ayaa billawday xilli shanti galabnimo ahayd ee xilliga dalka Suuriya, waxaana loo adeegsdaay sideed helikobtar oo ah diyaaradaha sida qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka oo ay kamid yihiin unuga Delta.
Waxay ku dul duuleen dhul uu Madaxwyene Trump sheegay in uu yahay khatar oo ku yaalla waqooyi bari dalka Suuriya, iyagoona ku sii jeeday halka lagu sheegay Al Baqdaadi.
Sidoo kale hawlgalka ayaa la sheegay in ay ka qeyb qaateen diyaarado kale iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka oo ku sugnaa bariga dhexe.
Previous: Gudoomiyaha xilka laga qaaday ee Puntland oo sheegay in ay sharci ahayn codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
Next: Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya oo si rasmi ah ula wareegay xilka Xogheyaha fulinta IGAD..
Trump attacks impeachment witness Yovanovitch during hearing
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa “ waa in wax laga qabtaa amni darada degmada Afgooye..
Ilhaan Cumar “ waxaan waxan warqad u qortay xaakimka maxkamadda, waxana ka codsaday in xukunka uu u khafiifiyo oo aan xukun dheer lagu xukumin Patrick..